सर्वश्रेष्ठ स्टेक मारिनाडे (स्टीकको कुनै पनि कटौतीलाई टेन्डरराइज गर्दछ!) - व्यंजनहरु
मकारोनी र चीज चेडर चीज सूपको साथ बनाईयो
तपाईंले कतिबेर सॉसेज उमाल्नु पर्छ
स्टोरमा किनिएको नीबू मेरिंगु पाई फ्रिज गर्न आवश्यक छ
सर्वश्रेष्ठ स्टेक मारिनाडे
हरेक राम्रो स्टेक समान रूपले राम्रो स्टेक मरीनेडको हकदार छ!
एक मरीनाडेले स्वाद थप्दछ जब मांसलाई स्टीकहाउस गुणस्तर स्टीक्स बनाउन मोटा टेन्डिizing गर्दा मोटा मूल्य ट्याग हुँदैन। उज्यालो र प्यारी छ, यो flank वा स्कर्ट स्टेक, वा sirloin को लागी उपयुक्त छ!
केही ड्यासहरू पनि थप्न सकिन्छ ह्यामबर्गर प्याट्स उनीहरू ग्रिलमा जानुभन्दा पहिले!
कुनै पनि स्टोरले किनेको इटालियन शैलीको ड्रेसिंगले एक मरीनाडेको रूपमा काम गर्न सक्छ, तर घरको मरीनाडे जहिले राम्रो हुन्छ। र यो नुस्खा बनाउन सजिलो छ — प्लस तपाईं यसलाई फ्रिज वा पेन्ट्रीमा जे पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ!
तपाइँ कहिलेसम्म बटरक्रिम फ्रुस्टि store भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ
एक Marinade के गर्छ?
मरीनाडेस एसिडिक वा एन्जाइम घटकहरू जस्तै वाइन, सिरका, निम्बूको रस, वा उनीहरूको कुनै पनि संयोजनबाट बनेको हुन्छ। एसिडले मासुको स्थिरता परिवर्तन गर्दछ, यसलाई कोमल बनाउँदै ।
मरीनेड्समा प्राय: नुन जडीबूटिहरू र बोल्ड स्वादहरू हुन्छन् जुन फलस्वरूप आउँछ मासु स्वाद ।
Marinades साथ मद्दत caramelization हामी त्यो धेरै माया गर्छौं कि राम्रो ब्राउन क्रस्ट दिन।
एक डबल ब्याच बनाउनुहोस्
यो नुस्खा सँगै राख्न यत्ति सजिलो छ, किन यसलाई दोब्बर गर्दैन? हामीलाई थाहा छ तपाईले यति धेरै प्रयोग गर्नुहुनेछ!
यो गाईको मासु वा सुँगुरको मासुबाट ग्रील्ड शाकाहारी र अधिकमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक डबल ब्याच मिक्स र तपाईं यसको लागि तयार नभएसम्म अतिरिक्त फ्रिजर मा भण्डार गर्नुहोस्।
तपाईंसँग प्राय: हुनसक्छ, यदि यस सामग्रीका लागि तपाईंलाई आवश्यक सबै सामग्रीहरू होइन भने, जबसम्म तपाईं आधारभूत कुराहरूसँग रहिरहनुहुनेछ!
एक एसिड वा एन्जाइम Ty व्याख्या अधिक केहि जान्छ, जबसम्म एसिडिक कम्पोनेन्ट हुन्छ!
जे सुकै होस् जडिबुटी वा मसला तपाईं मिक्स मा टस गर्न चाहनुहुन्छ! इटालियन मसाला मिश्रण सधैं राम्रोसँग काम गर्दछ।
लसुन सधैं एक लोकप्रिय विकल्प हो। यसलाई महीन मिसाउनुहोस् वा लसुन पाउडर प्रयोग गर्नुहोस्
नबिर्सनुहोस् नुन र मरिच । सोया सॉस वा अन्य नुनिलो मनपर्ने थप्न सकिन्छ।
कति लामो स्टेक मैरिनेट गर्न
टेंडर स्टीकहरू मनपर्दछ रिबेइ वा sirloin अधिकतम hours घण्टा मैरिनेट गर्नुपर्छ। जसरी उनीहरू पहिले नै कोमल छन्, तपाईं त्यस भन्दा लामो म्यारिनेट गर्न चाहनुहुन्न वा मासु धेरै नै भाँच्नेछ र बनावट अप्रिय बन्न सक्छ।
के कुखुरा कोर्डन निलो संग जान्छ
स्टेकको जस्तै कठोर कटाई खाली स्टेक , स्कर्ट स्टीक, वा चकले लामो मैरिनेट गर्न सक्दछ, २ hours घण्टा सम्म (म सामान्यतया अर्को रातको डिनरको लागि अघिल्लो रात गर्दछु)।
पिज्जा चटनी र मरिनारा ससको बिच फरक
स्टेक मरीनेड ती कठोर, कम महँगो मासुको भाँडा, ट्राई-टिप्स, र काँधमा प्रयोग गर्नका लागि उत्तम छ, त्यसैले यसलाई उदारतापूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्।
प्रयोग गरिएको मरीनेड खारेज गर्नुहोस् वा यसलाई रोलिil फोकामा उमालेर १। Minutes ° एफ मा पुग्न सुनिश्चित गर्न केहि मिनेटका लागि।
आइस क्युब्स ट्रेहरूमा मरीनाड फ्रिज गर्नुहोस् ताकि तपाईं स्टिक म्यारिनेट गर्ने समय भएको हुँदा तपाईं जति थोरै वा जति तपाईंलाई मनपराउन सक्नुहुन्छ-यस तरिकाले मरीनाडे ताजा रहन्छ!
सबै भन्दा राम्रो परिणामको लागि, मासुमा मरीनेड प्रयोग गर्नुहोस् जब दुबै कोठाको तापक्रममा हुन्छन्।
अधिक Fave Marinades & Brines
सर्वश्रेष्ठ चिकन मरीनाडे
पोर्क चोप ब्राइन
अदुवा लहसुन साल्मन मरीनाडे
इजि पोर्क टेंडरलिन मरीनाडे
ग्रील्ड स्टीक फाजिटास
चिकन स्ट्रिट टाकोस
के तपाईलाई यो स्टेक मारिनेड मन पर्‍यो? निश्चित गर्नुहोस् रेटिंग र कमेन्ट तल छोड्नुहोस्!
तयारी समय। मिनेट कुक समय। मिनेट कुल समय१० मिनेट सर्भिंगहरू१ लेखकहोली निल्सन यस स्टेक मारिनाडेले कुनै पनि प्रकारको मासुलाई टेन्डराइज गर्दछ र रमाईलो किक थप गर्दछ! प्रिन्ट गर्नुहोस् पिन
▢१ ल्वाल लसुन कीमा बनाइएको वा अधिक स्वाद गर्न
▢दुई चम्मच balsamic सिरका
▢१ चम्चा डिजोन मस्टर्ड
▢१ चम्चा ताजा अजमोद काटिएको
▢दुई चम्मच ताजा रोमेरी काटिएको
▢१ चम्मच काली मिर्च
▢दुई स्प्रिगहरू ताजा थाइम वा as चम्मच सुक्खा थाइम पातहरू
कचौरा वा फ्रिजर ब्यागमा सबै सामग्रीहरू मिलाउनुहोस्।
२ पाउंड स्टेक सम्म थप्नुहोस् र कम्तिमा १ घण्टा वा hours घण्टा सम्म मरीनेट गर्नुहोस्।
स्टीक्स हटाउनुहोस् र मरीनेड खारेज गर्नुहोस्।
ग्रिल वा इच्छित दान गर्न ब्रेल।
यो मरीनाड फ्रिजमा मेसन जारमा २ हप्ता सम्म रहनेछ।
क्यालोरिज:577,कार्बोहाइड्रेट:१g,प्रोटिन:।g,मोटो:। 55g,पागलिएको बोसो:।g,सोडियम:२26२26मिलीग्राम,पोटासियम:4 384मिलीग्राम,फाइबर:दुईg,चिनी:9g,भिटामिन ए:2 43२IU,भिटामिन सी:१मिलीग्राम,क्यालसियम:36मिलीग्राम,फलाम:।मिलीग्राम
कीवर्डसर्वश्रेष्ठ स्टेक मारिनाडे, कसरी स्टीक मारिनाडे, स्टेक मरीनाडे, स्टेक मारिनाडे विधि बनाउने कोर्सड्रेसिंग, सॉस पकाइयोअमेरिकी© SpendWithPennies.com। सामग्री र फोटोग्राफहरू प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित छन्। यस नुस्खाको साझेदारीलाई दुवै प्रोत्साहन र सराहना गरिन्छ। कुनै पनि सोशल मिडियामा पूर्ण रेसिपीहरू प्रतिलिपि गर्न र / वा टाँस्न कडा निषेधित छ। कृपया यहाँ मेरो फोटो प्रयोग नीति हेर्नुहोस् ।